AKHRISO: Tobanka Ciyaartoyda ee Loogu Hadal-Heynta badan yahay Suuqa Kala Iibsiga | Wakaaladda Wararka Hiilnews
AKHRISO: Tobanka Ciyaartoyda ee Loogu Hadal-Heynta badan yahay Suuqa Kala Iibsiga
Salamu calaykum waraxmatulaah dhamaan akhristayaasha sharafta iyo ixtiraamka naga mudanow ku soo dhawaada barnaamujkeenii tobanka ciyaartoy ee ugu qiimaynta sareeya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee maanta oo Axad ah kuwaas oo inta ugu badan looga hadlay suuqa kala iibisaga isla markaana lala xiriirinayo kooxo cusub. Suuqa kala iibisaga ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmay 1-da July waxayna koox kastaaba si hordhac ah ugu dadaaleysaa iney hesho saxiixyo cusub.
Football Whispers oo ah shabakada ugu horaysa dhinaca saadaalinta suuqa kala iibisaga ayaa qiimayn khaas ah ku samaysa wararka ciyaartoyda sida wayn loogaga hadlo suuqa kala iibsiga, waxayna si joogto ah u soo gudbisaa hadba ciyaartoyda loogu hadal haynta badan yahay suuqa kala iibsaga iyo kooxaha doonaya ee lala xiriirinayo.
Qiimaynta Football Whispers ee suuqa kala iibisaga waxaa ugu sareysa 5 oo ah xiddig sida ugu weyn loo hadal hayo waxayna Sky Sports iyo Football Whispers ay iska kaashadaan in ay hadba soo saaraan ciyaartoyda suuqa kala iibsiga sida wayn looga hadal hayo iyo qiimaynta oo la socota. Haddaba Shabakada Laacib.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa tobankii ciyaartoy ee saaka suuqa inta ugu badan looga hadlay.
Jairo Riedwald ayaa kusii dhawaanaya inuu ku biiro Crystal Palace, xidigaan ka tirsan Ajax wuxuu u muuqdaa mid imaanaya horyaalka Premier League, halka Javier Hernandez uu isna dib ugu soo laabanayo Premier League.
Weeraryahankii hore Manchester United ayaa diyaar inuu iftiimiyo waayahiisa kubadda cagta si uu ugu soo laabto horyaalka uu aaminsan yahay inuu ugu weyn yahay dunida.
Virgil van Dijk ayaa u muuqda inuu ku biirayo Liverpool, madama xidigaan uu diiday inuu kooxda u raaco safarka kulamada saaxiibtinimo, Reds ayaana soo rogaal celisay xiisahii ay u qabtay xidigii hore Celtic.
Benjamin Mendy ayaa diyaar u ah inuu kusoo biiro Man City – wiilka reer France lacagaha uu ku imaan lahaa Etihad Stadium waa lagu heshiiyay.
Wararka xanta ah ee maanta la qorayo waxaa ka mid ah in Alexis Sanchez uu kusii dhawaanayo ku biiritaanka Paris Saint Germain – halka Ivan Perisic wali lala xiriirinayo Manchester United.